Itoobiya oo sheegtay in ciidamadoodu ku dileen 101 dagaalyahan oo al-Shabaab ah gudaha Soomaaliya - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeHomeItoobiya oo sheegtay in ciidamadoodu ku dileen 101 dagaalyahan oo al-Shabaab ah gudaha Soomaaliya
June 10, 2016 Puntland Mirror Home, World 0
Afhayeenka Dowlada Itoobiya, Getachew Reda.
Itoobiya ayaa sheegtay in ciidankooda jooga gudaha Soomaaliya ay dileen 101 dagaalyahan oo al-Shabaab ah kuwaas oo Arbacadii weerar kusoo qaaday saldhig ciidan oo ay isticmaalayeen Howlgalka Midowga Afrika ee dagaalka kula jira maleeshiyada al-Shabaab ee xiriirka la leh ururka Al-Qaacida.
Xarakada al-Shabaab ayaa gelinkii hore ee shalay sheegtay in ay weerar culus ku qaadeen saldhiga Halgan oo kuyaala bartamaha gobolka Hiiraan ee Soomaaliya, sida ay ku sheegeen fariin ay ku qoreen Telegram-kooda.
Afhayeenka dowlada Itoobiya Getachew Reda ayaa beeniyay in ay al-Shabaab dileen tobonaan askartooda ah, iyadoo al-Shabaabna ay kaga dhinteen 16 dagaalyahanadooda ah.
“Al-Shabaab waxay isku dayeen in ay weeraraan ciidamadayada ku sugan bartamaha Soomaaliya laakiin ciidamadayada waxay dileen 101 maleeshiyo ah waxayna burburiyeen qalab culus oo ay lahaayeen,” Getachew ayaa sidaa yiri.
“Wali waxaanu qiimaynaynaa inta qof oo dhankayaga waxyeelo soo gaartay laakiin in ay dileen 43 askari oo Itoobiyaan ah xaqiiqdii waa arrin been ah. Tani waa been abuur ay iyagu samaysteen,” ayuu ku daray.
“Dagaalyahanada Mujaahidiinta ah waxay weerareen saldhig waxayna ku xasuuqeen in badan oo Itoobiyaan ah,” al-Shabaab ayaa sidaa ku sheegtay fariin ay soo dhigeen barta Telegram-ka, waxayna tirada dhimashada Itoobiya sheegeen in ay gaarayso ilaa 60 askari.
Tirada khasaaraha ee nooca weerarkan ayaan macquul ahayn in si madax-banaan loo ogaado. Al-Shabaab badanaa waa ay buunbuunisaa, halka AMISOM aysan si caadi ah u bixin faahfaahinta dhabta ah ee khasaaraha.
(Warkaan waxaanu kasoo xiganay oo qortay wakaalada wararka AFP, waxaa turjumay Puntland Mirror)
Shir-weynaha madaxda urur goboleedka IGAD oo Muqdisho ka furmay
Muqdisho-(Puntland Mirror) Shir madaxeedka wadamada ku bahoobay urur goboleedka IGAD ayaa maanta oo Talaado ah si rasmiya uga furmay caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Madaxweynaha Soomaaliya oo dalkiisa martigeliyay shirka ayaa si rasmiya u furay shirka. [...]
Garoowe-(Puntland Mirror) Puntland ayaa ciidamo badan u dirtay gobolada Sool iyo Sanaag isku day ah in looga hortago dadaalka ay Somaliland ku doonayso in sanduukhyada doorashada ay ku geyso Sool iyo Sanaag, sida ilo-wareedyo dhanka [...]